मेयर बनेको २४ घण्टामै परिवर्तनको आभाष गराउँछु : वीरगञ्जका मेयरका उम्मेदवर सिंह
वीरगञ्ज, २२ बैशाख । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा जाने उद्घोषसमेत गरीसकेका राजेशमान सिंह अन्ततः जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा फर्किए । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नगरप्रमुख (मेयर) मा तेस्रो स्थानमा रहेका सिंह यसपटक पहिलो स्थानमा हुने दाउमा छन् । २०५४ सालमा वडा सदस्य बनेका सिंहको गत निर्वाचनमा १२ हजार १ सय ६५ मत ल्याएका सिंह सत्ता गठबन्धनबाट मधेश प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्जको मेयरका साझा उम्मेदवार हुन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकिकृत समाजवादी र नेकपा माओवाद
यहि वैशाख ३० गते हुन गईहरको स्थानिय निर्वाचन सम्वन्धमा सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाको नेकपा एमालेको मेयरका उम्मेदवार श्याम श्रेष्ठसंग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश.......... * प्रचार प्रसार कुन रुपमा अगाडी बढिरहेको छ ?अहिले घरदैलो कार्यक्रम गरिरहेका छौं । बडाहरुले पनि घरदैलो कार्यत्रंmम गरिरहेको छ । बडाले गरिरहेको कार्यक्रममा म पनि सहभागिता भई चुनाव प्रचार प्रसार गरिरहेको छु । अहिलेसम्मको अवस्था राम्रो रहेको छ । हाम्रो तयारी राम्रै भइरहेको छ । जुन ढंगले हामी मिहिनेत गरिरहेका छौं, त्यो हिसाबले पक्कै पनि जनताको साथ र सहयोग पाउनेछौं । * चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा जनताको घरदैलोमा जाँदा के&ndash
1,052 पटक पढिएको
वीरगञ्ज, २१ बैशाख । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर बिजय कुमार सरावगी पुनः मेयर बन्ने कसरतमा छन् । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालिन संघिय समाजवादी फोरमबाट १९ हजार ३ सय ९३ मतका साथ मेयरमा निर्वाचित भएका सरावगी पुनः मेरमै दोहोरिन्छु भन्नेमा विश्वस्त छन् । मेयरकै टिकट पाउन नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका सरावगीलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को पनि समर्थन छ । मेयरका उम्मेदवार सरावगीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश । व्यावसायीय क्षेत्रबाट राजनीतिमा छिर्नुभयो, छिर्ने बित्तिकै मेयरमा बाजी पनि मार्नुभयो । फेरी पनि मेयर बन्न कसरत गरीरहनुभएको छ ब्यापारभन्दा धेरै राजनीतिमा फाइदा
मिर्चैयाका म नै युवाहुँ, जनताले फेरी अनुमोदन गर्ने विश्वास छ : मेयर पदका उम्मेदवार यादव
सिरहा,१९वैशाख । मिर्चैया नगरपालिकामा नेकपामाओवादी केन्द्रबाट मेयर पदका उम्मेदवार श्रवण कुमार यादव आफूलाई युवा उम्मेदवारको रुपमा परिचित गराउन चाहन्छन् । निवर्तमान मेयर समेत रहेका यादव आफूले संघियताको कार्यान्वयनको अवस्था, कोभिड महामारी र स्थानिय दलहरुको अवरोधका वावजुत मिर्चैया नगरपालिकाको विकासमा महत्वपूर्ण काम गरेको उनको दावी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, कृषि, जस्ता क्षेत्रमाउल्लेख्य कामभएको भन्दै अवमिर्चैया नगरपालिकालाई नयाँ ढङ्गले विकासको गतिदिनआफू अझ सक्षमभएको बताउँछन् ।उनले विभिन्न खालका अवरोधका बावजुत आफूले नगरको विकासमा योगदान पुर्याएको र अवको दिनमा मिर्चैयाको समग
वीरगञ्जको विकास गर्ने हुटहुटीले राजनीतिमा छिरेको हुँ ः मेयर सरावगी
विजय कुमार सरावगी, वीरगञ्जबासीका लागि कुनै अपरिचित नाम हैन । उद्योग एवम् व्यवसायको क्षेत्रमा प्रतिष्ठित मानिने सरावगी राजनीतिक रुपमा थोरै समयमै धेरै उपलब्धी प्राप्त गर्ने नेताहरुको सूचीमा अग्रपंक्तिमा आउँछन् । वि.स. २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालिन संघिय समाजवादी फोरमबाट साम, दाम, दण्डभेदको बलमा मेयरको टिकट पाएर बिजयी भएका सरावगी अब पुनः मेयरमै दोहोरिन्छन् कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ । सरावगीले मेयर भईसकेपछि गरेका कामहरुको आधारमा नामसँगै बदनाम पनि कमाएका छन् । अर्थात उनका प्रशंसक भएजस्तै आलोचकहरु पनि छन् । निर्वाचित भएदेखि अब केही समयमात्रै कार्यकाल बाँकी हुँदा उनले गरेका काम एवम् आगामी राजनीत
प्रकाशित मितिः चैत्र १४, २०७८
हामीले चुनावमा प्रतिबद्धता गरेको ९५ प्रतिशत काम गरेका छौं : मेयर कार्की
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण भएसँगै जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल अब केही समय मात्र बाँकी छ । जनप्रतिनिधिहरूले पाँच वर्षको अवधिमा आफूले बाचा गरेका कति काम पूरा गरे ? जनपक्षीय कामह कत्तिको भए ? यसै सन्दर्भमा विशाल बस्नेतले बर्दिबास नगरपालिकाका नगर प्रमुख विदुर कार्कीसँग कुराकानी गरेका छन । कार्यकालको उत्तारार्द्धमा हुनुहुन्छ । बर्दिबास नगरपालिकाका मेयरले केही गरेनन् भन्ने मात्र आलोचना छ नि ? अब आलोचना गर्नेलाई के पो भन्न सकिन्छ र ? उहाँहरू स्वतन्त्र नै हुनुहुन्छ । तर बर्दिबास नगरपालिकाले यो पाँच वर्षको अवधिमा जति काम गरेको छ, ज
प्रकाशित मितिः फाल्गुन २७, २०७८
सीके लाल समाज बुझ्न सञ्चारमाध्यम पछ्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आफ्नै सीमितताहरू छन् । तात्कालिक सूचना प्रवाह एवं तत्क्षण विश्लेषणको दबाबले गर्दा अन्तर्जालका पाटीहरू आफ्ना मूल अवलोकनकर्ताहरू (कोर आडिअन्स) को रुचिबाहिरका सामग्री पस्किने आँट गर्न सक्दैनन् । आगन्तुकको आलोकनका लागि अन्तर्जालका ठेगानाहरूबीचको निर्मम प्रतिस्पर्धामा नियमित अवलोकनकर्ताहरूको पूर्वाग्रहलाई बढावा दिनु स्थापित पाटीहरूको बाध्यता हो । मनोरञ्जनात्मक सूचना टेलिभिजनको प्रधान गुण भएकाले गम्भीर समाचार एवं विचारलाई हल्का तवरले प्रस्तुत गर्नु तिनको विवशता हुन जान्छ । अन्य सञ्चारमाध्यमका तुलनामा रेडियोका प्रतिस्पर्धात
अभिषेक घिमिरे नेपालको शैक्षिक प्रणाली खस्कँदो अवस्थामा छ । सुधारका लागि प्रयास नै नभएका होइनन् । तर कर्मकाण्डी प्रशासन प्रणाली, कमजोर व्यवस्थापन, अदूरदर्शिता र दिशाविहीनता, अनुत्तरदायी सरकार र यसको बलियो सङ्कल्पको अभावमा देशको शिक्षा अभिभावकविहीन अवस्थामा पुगेको छ ।९० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रधानाध्यापक एक्काइसौँ शताब्दीको विद्यालय नेतृत्व गर्न असक्षम छन् । उनीहरू दुई कारणले असक्षम देखिएका छन् । पहिलो उनीहरूमा विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नेतृत्व सीपको कमी देखिन्छ । सुन्दा अचम्म लाग्छ अधिकांश प्रधानाध्यापकलाई आफूले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने थाहा छैन र कतिपय थाहा पाएर पनि गर्दैनन् । दोस्
आहुति प्रगतिशील लेखक श्यामप्रसाद शर्माले साठी वर्षभन्दा अघि लेखेको एउटा कालजयी निबन्ध थियो— ‘तँ, तिमी, तपाईं, हजुर’ । निबन्धको शीर्षकमा सम्बोधनमा प्रयोग हुने चारवटा मात्र शब्द परे पनि उक्त निबन्धले त्यति बेलाको समाजको उचनीचमय तहगत संरचना (हाइरार्की) को व्यापक आयाममाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यो समय देश राजा–महाराजाको थियो, गाउँहरू सामन्तहरूका कब्जामा थिए र राजधानीमा समेत काजीहरूको हालीमुहाली थियो । सबै सामन्तवादी समाजमा जस्तै त्यति बेला नेपालमा पनि उचनीचमय सामन्तवादी संस्कृति थियो र त्यसैको प्रतिविम्ब व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दा पनि प्रकट हुनु स्वाभाव
चन्द्रकिशोर प्रदेश २ सरकारले प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ घोषणा गरेको छ । यसको स्वागत र विरोध भइरहेको छ । सम्मति र विमति दुवै लोकतन्त्रकै पाटा हुन् । कैयौं प्रश्न उदाएका छन्, कतिपय जवाफ फेरि पनि छरपस्टिएका छन् । लामो समयदेखि थाती रहेको यो विवाद टुंगो लगाउन नसक्दा प्रदेश २ सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । यस परिप्रेक्ष्यमा विवादलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले टुंगो लगाएकामा प्रदेश २ सरकारको नेतृत्वलाई चिरकालसम्म याद गरिनेछ । खास गरी पहिचानआधारित प्रदेशको नाम दिने पहिलो प्रदेशका रूपमा यो चिनिने भएको छ । जब एउटा अटल अडानले मूर्तरूप लिन्छ, त्यसले कैयौं दृष्टिकोणका रूख